यमनको माारिब प्रान्तमा भएको भिडन्तमा ४७ जनाको मृत्यु - Kantipath.com
यमनको मारिब क्षेत्रमा गएको २४ घन्टाभित्र भएको हिंसामा परी कम्तीमा पनि ४७ जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ । सो क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि हिंसा जारी रहेको पनि बताइएको छ । द्धिपक्षीय भिडन्तमा परेर ती ४७ जनाको गएको २४ घन्टा यता निधन भएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
सो क्षेत्रमा साउदी अरेबियाको सहयोगको सैन्य समूहले हवाई कारबाही पनि गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा भएको सो हवाई कारबाहीबाट नै ती विद्रोही मारिएका छन् ।पछिल्लो २४ घन्टामा पनि साउदी नेतृत्वको सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा परेर २५ जना हुथी व्रिद्रोही मारिएका छन् । उता हुथी विद्रोहीले यमनको सेनामाथि पनि हमला गरेका छन् ।
तेलका लागि धनी सो क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि यहाँका विद्रोहीहरुले तेल कब्जा गर्नका लागि भिडन्त गर्ने गरेका छन् ।
तर यहाँको सरकारी सेनाले पनि यहाँको स्थानीय सरकार र स्थानीय विभिन्न जातिहरुसँग मिलेर विद्रोहीहरुका विरुद्धमा सशक्त कारबाही गर्ने गरेको छ ।
Previous Previous post: वामदेवले पनि फुटाउन थाले एमाले : भक्तपुर अध्यक्षमा चन्द्रभक्त श्रेष्ठ
Next Next post: ओलीले बोलाए एमाले केन्द्रिय समिति बैठक : ४ नेतालाई प्रवेश निषेध !
सामूहिक बलात्कार गर्ने पक्राउ
२४ वर्षीया युवतीमाथि ३ जनाले चक्कु प्रहार गर्ने धम्की दिँदै बलात्कार गरे !
प्रहरीमाथि गोली लाग्यो
पिडितको ४२ लाख खाने वकिल महाशाखाद्वारा पक्राउ
डोटीमा २० वर्षिया अनिताको गोली हानेर हत्या